Hayluu Disaasaa | OromianEconomist
Oromo music legend Hayluu Disaasaa (Haylu Disasa) died age 61. May his soul rest in peace January 18, 2017
Posted by OromianEconomist in Haylu Disasa, Hayluu Disaasaa, Oromo Art, Oromo Music.
Tags: Africa, Africa music, Hailu Disasa, Hayluu Disaasaa, Kemetic Africa music, Oromo, Oromo music, Oromummaa
Wallisaan Oromoo hangafaa fi beekamoon dhalatee waggaa 61tti adunyaa kana irraa boqochuun ibsame. Hayluun kan dhalate Lixa Oromiyaa, Wallaggaa, Qellem, Qaaqetti. Manni jirrenya isaa Finfinnee, Birbirsa Goorooti. Hayluun abbaa ilma tokkichaa, Sanyi Hayluu Disaasaati.
Hayluun hamma adunyaa kana irraa boqotutti aadaa fi aartii Oromoo calaqqisiisuu fi dagaagsuu irratti shoora guddaa taphachaa ture. Sirboota Afaan Oromoo barreesuu fi sagalee isaa kiloleen surbuudhan, diraamaa, fiilmii fi tiyaatira Afaan Oromoo adda addaa hojjechuun jiruu seenaa qabeessa saba isaaf dalagaa ture. Hayluun kana hundaa kana rawwachaa kan ture dhibbaa Oromummaa isaatiif isa irra gahaa turan hundaa danda’ee irra aanuu dhaani. Jirreenyi isaa hamma boqotutti inni keesa turesi kanuma mul’isa.
Sirboota Hayluu Disaasaa ittiin beekamu keessa muraasni: Geerarsa, yaa warra baddaa, yaa finna koo, naggaaden haa dabartuu, yaa damma koo, amma yaa marii, shaggee tiyyaa fa’i.
Biyyoon isatti haasalphatu.
Bilisee boqochuu artist Hayiluu disaasaa dhaggeesse jirta??
Dhaamsa mucaa isaa sanyii Hayiluu
Ergaa karaa keessaa dhuftee,
mee oromoota nannoo finfinnee jiraniitti naaf dhaamigiiftiiko. kaleessa boqochuu Weeellisaa angafaa kana dhagahee awwaalchi isaas kaleessuma se’en gara finfinnee naanno birbirsa pihassaa jarri jedhan bakka itti galaa ture iyyaafadhee dhaqe. Garuu anoo ofittan qaana’e waanan argeen eenyummakoo jibben sitti hima mana osoo hin taanee qooxii handaqqoorra gargar hin jiru. gootichi aartii Oromoo kun achuma keessa taa’eet waggaa 42 baandii hagar fiqir keessatti masaanuuwwan afaanifii aadaa oromoon mormaa aartii oromoof gumaachaa ture. garuu harkasaa hin arganne uummata kanarraa.silaa goonni mana hin qabu jedhu mana gaarii teesso bareeda jiruu dhuufaa mijataa dhabuunsaa omaamiti. baga dhes seenaan isaa siidaa ta’et yaadma. innoo uummataaf jiraataa turee. kan na ajaa’ibsiise garuu osoo mana hinqabaatii waltajjiirratti yoo bahu fuulsarra kolfafi qoosaa wallee malee miirri dhabaa fi kadhaa hin mul’atu.goodo inni itti galu keessa wanti tokko hin jiru.garuu inni dhukkubsachuus erga eegalee irra bubbule jedhan takkaa mootummaanis ta’e namoota dhuunfaan nagargaaraa yoo jedhu hin dhageenye hin jennes. Garuu baandii sana keessatti yeroo heddu hacuucamaa gidirfamaa hidhamaa tuffatamaa akka jiru carra argatetti fayyadamee himatee ture roorroo sabaaf naa birmadhaa jedhaa ture.keessattu sirba yaa warra badda jedhurratt fi yeroo waltajjirratti sirbitu jechota qineen nuarrabsita jedhamee hidhamas hojirra hari’ames ture. Wellisa Hayiluu Disaasaa tokkicha qixxee kumaa bara 1963 waltajjiirratti bahee afaan oromoo afaan aartii afaan midiyaaf tolu kanittin sirbanii bashannan ta’u agarsiise. wagga 40 oromoo bakka bu’e tiyaatiran welluun diraamaan baandii agar fiqir keessa tajaajile xuratas bahe ture. yaa dhaloota qubee goota kanatu du’ee awwaalcha dhabe nurraa. uuuuuu….https://www.facebook.com/bilise.gadisa.7/posts/1852571331693986?pnref=story.unseen-section
አንጋፋው የኦሮሚኛ ሙዚቃ አቀንቃኝ ኃይሉ ዲሳሳ አረፈ
(ዘ-ሐበሻ) ከአንጋፋ የኦሮሚኛ ሙዚቃ አርቲስቶች መካከል አንዱ የሆነው አርቲስት ኃይሉ ዲሳሳ ትናንት ምሽት ጃንዋሪ 18, 2017 ማረፉ ተሰማ::
ድምጻዊ ሃይሉ ዲሳሳ በተለይ በሀገር ፍቅር ትያተር በኦሮሚኛ ዘፈኖች ዝነኛ ድምፃዊ ነበረ:: ኃይሉ በ61 አመቱ ህይወቱ ሲያልፍ የ1 ልጅ አባት እንደነበር የሕይወት ታሪኩ ያስረዳል::
Oromo music legend artist Hayluu Disaasaa died 18 January 2017, age 61. He is survived by his only son.
The following are some of Hayluu Disaasaa’s popular music works:- Yaa damma koo, geerarsa, na fuute, shaggee tiyya, amma yaa marii.